श्रीमान पराजुलीका चार श्रीमती, घरमा जुवाँको खालदेखि देउवासँग एउटै थालसम्म ! « Pana Khabar
श्रीमान पराजुलीका चार श्रीमती, घरमा जुवाँको खालदेखि देउवासँग एउटै थालसम्म !
समय : 9:58 pm
न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा श्रीमान भनिन्छ । श्रीमानको दोहोरो अर्थ हुन्छ । मानको पनि श्रेष्ठ र पति । लोकले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई मानका हिसाबले कुन श्रेणीमा राख्छ, बहश जारी छ । तर, पत्नीको संख्याका दृष्टिले श्रीमान पराजुली समकालीन समाजमा अग्रस्थानमा पर्ने देखिन्छ । अर्थात उनी चार श्रीमतीका श्रीमान हुन् ।
बाहिर जेजस्तो छबी बनेको भएपनि परिवार र आफन्तका बीचमा पराजुली देउतैको कोटीमा रहेको बताइन्छ । भलै, एउटी श्रीमतीको संकास्पद निधनका कारण उनका विरुद्ध लुकीछिपी बात गर्नेहरु नभेटिने होइनन् ।-नेपाल आजबाट
प्रकाशित मिति : २०७४ पुष २५,मंगलबार
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार अमेरिकी डलर नाघ्यो